DECKER HUNTING TERRIER DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Decker Hunting Terrier Dog Fampahalalana sy sary
Monty the Decker Hunting Terrier amin'ny roa taona— 'Monty dia Decker Hunting Terrier, 2 taona, antsoina koa hoe Giant Rat Terrier. Marina amin'ny anarany izy ary mpihaza marina . Mivoaka foana izy mihaza ary misambotra voalavo , bitro sns. Alika fiompiana tsara izy ary tsara amin'ny fifandraisana amin'ny ankamaroan'ny biby fiompy. Manana fitiavana manokana izy omby . Tsy tsara ny ataony akoho satria tsy azo vahana ny instinct-ny rembiny. Tsara amin'ny olona rehetra Izy, ankizy sy ny olon-dehibe. Tena izy koa sariaka alika, fa noho ny hazany dia tsy maintsy jerena akaiky ny manodidina azy alika kely . Milanja 35lbs i Monty ary mitaky a fanatanjahan-tena be dia be . Tsy hahita soa izy amin'ny an trano fomba fiaina ary sambatra indrindra rehefa afaka amin'ny kijana malalaka izy. Mianatra haingana dia haingana izy ary tena alika mahay. Mpihazakazaka haingana izy ary matetika tonga rehefa nantsoina izy . Alika manentana ny sakafo izy, saingy mandeha tsara Training ary tsy mpangataka. Tena tsy mivadika izy ary na dia 35lbs fotsiny aza dia alika matanjaka be fatratra izy. Tsy mpangalatra izy. Tsy hahita afa-tsy i Monty miondrika ianao raha misy karazana remby eo imasony. Alika mangina tokoa izy amin'ny ankapobeny ary tsy faly toy ny faritra maro hafa. '
Giant Rat Terrier
dek-er huhn-ting ter-ee-er
The Decker Hunting Terrier dia alika mihetsika tsara miaraka amin'ny tratra lalina, soroka matanjaka, vozona mafy ary tongotra mahery. Kambana ny vatany nefa feno hena. Ny sofina dia mety atsangana na tendrena ary entina miarina rehefa mailo ny alika. Izy io dia azo ateraka miaraka amin'ny rambony fohy na lava, ary tavela amin'ny toetrany voajanahary na miantsona amin'ny roa andro. Ny loko palitao dia misy perla, sabla, sôkôla, mena sy fotsy, tri-spaced, solid solid, black and tan, manga sy fotsy ary brindle mena. Ireo mpiompy miahiahy amin'ny alika miasa dia tsy saro-kenatra amin'ny pitsopitsony amin'ny tarehy.
The Decker Hunting Terrier dia alika manan-tsaina, mailaka ary be fitiavana. Tena manontany tena izy ary velona. Ity alika be fitiavana ity dia mahatonga namana tsara ho an'ireo izay mankafy alika mavitrika. Tsara amin'ny ankizy izy ireo, indrindra raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely izy ireo. Izy ireo, amin'ny ankapobeny, dia sariaka amin'ny olon-tsy fantatra. Decker Hunting Terriers dia mahavita mpitily tsara. Haingam-pandeha ireo alika ireo, tena milalao ary tsy mpiambina. Ny fomban'ireto alika ireto dia madiodio. Ny toetra velona, ​​feno feisty ary tsy misy tahotra dia hita any amin'ireo faritra tsara indrindra. Vonona ny hampifaly sy hamaly izy ireo ary haka fiofanana haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny alika. Ny Decker Hunting Terrier dia alika tsara fitondran-tena sy milamina. Mora ny mampiofana, maniry fatratra ny hianatra sy hahafaly ny tompony. Tian'izy ireo ny miaraka aminao ary manao izay ataonao. Tena mahay milomano ihany koa izy ireo, tsy milomano na matahotra ary tsy manana olana amin'ny rano. Izy ireo dia manao alika fiompiana tsara ary koa alika fianakaviana tena tsara ho an'ny biby fiompy sy fiarahana. Ity alika mafy orina ity dia ampiasaina amin'ny fihazana dia an-tsambo ary koa asa terery. Ny alika olon-dehibe dia afaka mizatra mora foana amin'ny fianakaviana misy na tsia. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena izay mety ahitana olana ara-paritany. Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Hahavony 18 - 23 santimetatra (45 - 58½ cm)
Milanja 25 - 38 pounds (11 - 17 kg)
Ny Decker Hunting Terrier dia tsy alika tsara indrindra amin'ny fiainana an-trano, fa afaka manao ok raha mivoaka any ivelany izy ireo amin'ny fanaovana fanazaran-tena isan'andro. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tokony hanana tokotany salantsalany farafaharatsiny. Ny Decker Hunting Terriers dia tia mihady, ary afaka mivoaka mora foana amin'ny tokotanin'ny fefy izy ireo. Raha manana fiarovana tsara izy ireo, dia afaka mandany fotoana be any ivelany. Tian'izy ireo ny ao anaty trano sy any ivelany mba milalao. Mpinamana alika mihaza izy ireo.
Ny Decker Hunting Terrier dia mila fanatanjahan-tena betsaka. Ity karazana ity dia mila raisina isan'andro mandeha lavitra na jogging. Tokony hanana 20-30 minitra isan'andro farafahakeliny, fa hankafy bebe kokoa. Ny lalao dia mankafy lalao sarotra sy romp any ivelany.
15-18 taona eo ho eo
Ankizy 5 ka hatramin'ny 7 eo ho eo
Ny Decker Hunting Terrier dia mora taovolony. Ny fikosehana sy fikosehana tsindraindray hanalana ny volo maty no ilaina.
Ny Decker Hunting Terrier dia avy amin'ny Rat Terrier kely antsoina hoe Decker na Decker Giant. Ny karazany dia nomena anarana taorian'ny mpiompy Milton Decker, izay namorona namana mpihaza lehibe kokoa avy amin'ny Rat Terrier mahazatra. Ny karazana dia eken'ny National Rat Terrier Association (NRTA).
DHTR = Registra mihaza ny Terrier
Monty the Decker Hunting Terrier toy ny alika kely amin'ny 3 volana
Moose the Decker Hunting Terrier toy ny alika kely amin'ny 5 volana
Monty the Decker Hunting Terrier amin'ny 2 taona
Monty the Decker Hunting Terrier amin'ny 2 taona any ivelany miaraka amin'i Moose alika kely Decker Hunting Terrier 5 volana.
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Terrier
Fampahalalana momba ny fiompiana alika amerikana tsy misy volo
Lisitry ny alika mitambatra rat terrier
pitbull sy australian omby alika mifangaro
sary an'ny alika omby anglisy
alika kely pitbull fotsy sy volontany
sary bulldog ra alfa manga
ohatrinona ny haben'ny chiantaraie
inona no poodle ny alika mitovy